Kulankii Kismaayo: Aragtidada Xildhibaanada & Odayaasha Dhaqanka | KEYDMEDIA ONLINE
Kulankii Kismaayo: Aragtidada Xildhibaanada & Odayaasha Dhaqanka
Muqdisho (KON) - Ka dib Shir maalmo qaatay oo ay magaalada Kismaayo ku lahaayeen Raysal wasaaraha iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo maamulka KMG ee magaalada Kismaayo ayaa Xildhibaano iyo Odayaasha Dhaqanka ee kasoo jeeda Kimaayo ka hadleen Arintaani.
Qaar ka mid ah waxgaradka gobalada Jubooyinka, Xildhibaano iyo Odayaasha Dhaqanka ayaa soo dhoweeyay go'aanka xukuumada Soomaaliya ee ay kaga soo horjeesatay shirka ka socda gobalada Jubooyinka ee haatan garwadeenka uu ka yahay Axmed Madoobe.
Nabadoon Maxamed Cadaawe oo kamid ah Odayaasha Dhaqanka Kismaayo ayaa Kooxda Raaskambooni ku tilmaamay "mixnada hortaagan Maamul u sameynta Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo"
"Hadii la rabo dib u heshiisiin iyo midnimo waa inay Dowlada Soomaaliya la wareegto Shirka Kismaayo" ayuu yiri Nabadoon Maxamed Cadaawe.
Suldaan C/casiis Cumar oo looyaqaano Suldaan Bayle ayaa sheegay in xukuumada Soomaaliya markii horaba ay ku qaldaneen in ay la fariisato koox Jamhad ah, wuxuuna sheegay in loo baahanyahay in xukuumadu ay go'aan qaadato.
Sidoo kale Xildhibaan Max’ed Max’ud Ibraahim ( Goodir ) oo ka tirsan Mudanayaasha Baaralamaanka Soomaaliya lana hadlay Idaacada Shabelle ayaa sheegay in Shirkaasi ay qayb ka ahaayeen Maamulada Azania iyo Koox Sheegatay Ahlusunna Waljamaaca Kuwaasi oo uu sheegay in aaney Ka muuqan damiir Soomaalinimo Marka laga sootago danahooda Gaarka ah sida uu hadalka u dhigay.
Xildhibaan Max’ed Max’ud Goodir ayaa yiri "Kooxahaadi ma mideysana, waxayna masalayaan Qabiil gaar ah"